माओवादीकै नेता भन्छन्–५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने प्रचण्डको प्रस्ताव फेल हुन्छ (अन्तर्वार्ता) - Dainik Nepal
माओवादीकै नेता भन्छन्–५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने प्रचण्डको प्रस्ताव फेल हुन्छ (अन्तर्वार्ता)
दैनिक नेपाल २०७३ मंसिर ३० गते २०:१८
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने गरी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । तर, माओवादी केन्द्रकै एक शीर्ष नेता भने सरकारलाई चुनौती दिँदै आन्दोलन र संघर्षमा छन् । यतिसम्म कि माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा बिहीबार अर्घाखाँची बन्दको आयोजना गरियो । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर दैनिक नेपालले नेता रायमाझीसँग गरेको टेलिफोन वार्ताः
– टोपबहादुर रायमाझी, स्थायी समिति, माओवादी केन्द्र
माओवादीको शीर्ष नेता भएर आफ्नै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुभएछ ?
– संविधान संशोधन सरकारको एजेण्डा हो । पार्टीको होइन् । यद्यपी हाम्रो पार्टी सरकारमा छ । तर, जनता र राष्ट्रको विषय भएकोले म जनतासँगै संघर्षमा आएको छु । यसले पाँच नम्बर प्रदेशलाई मात्र होइन् राष्ट्रलाई नै असर गर्छ । ९० प्रतिशतले बनाएको संविधानमा १० प्रतिशतले जे जे भन्यो त्यही मान्दै जाने ? अहिलेको प्रस्तावले देशमा विभाजन गर्छ । विभाजनले राम्रो गर्दैन । थप द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । यो त मधेसको माग पनि होइन् । अर्काे कुरा कुनै संघीयताको मोडालिटी बनेको छैन् । जे मन लाग्यो त्यही गरेर हुँदैन् । विवाद नभएको ठाउँमा विवाद बढाएर कसरी समाधान हुन्छ ? यो प्रस्तावले जनतालाई आक्रोशित बनाएको पाएको छु । र, म फेरि पनि भन्छु यो पार्टीको एजेण्डा होइन् ।
यो त पार्टीलाई नै च्यालेञ्ज भएन् र ?
– पार्टीलाई च्यालेञ्जको कुरा होइन् । जनता र राष्ट्रको कुरा हो । प्रस्ताव सरकारको हो । माओवादी केन्द्रको होइन् । र, म एक जनप्रतिनिधि भएको नाताले यो स्वभाविक हो ।
सरकारले संशोधन फिर्ता लिएन भने के गर्नुहुन्छ ?
आन्दोलनमा छु र जनतासँगै रहिरहने छु । र, यो प्रस्ताव संसदमा पनि पास हुने सम्भावना देखिन्न् । फिर्ता लिनुनै अन्तिम विकल्प देख्छु । अंकगणितीय रुपमा र जनताको भावना हेर्दा खेरीपनि प्रस्ताव पास हुँदैन् ।
यही रुपमा अगाडि बढे तपाईलाई कि माओवादीले कारवाही गर्छ कि माओवादी छोड्नुहुन्छ भन्छन् नि ?
दुईटै कुरा हुँदैन् । पार्टी कसैको ठेक्का होइन् । पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने प्रस्तावविरुद्ध पार्टीमा मैले मात्र बोलेको छु । मलाई धेरै बोल्नै दिएनन् । त्यसकारण यो पार्टीको औपचारिक निर्णय होइन् । मलाई कारवाही पनि हुँदैन् र मैले पार्टी छाड्ने कुरा कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन् ।
तपार्ईंकै पार्टीका नेता वर्षमान पुनले पार्टीबाट औपचारिक निर्णय भएको भनिराख्नुभएको छ । यतिसम्म कि तपाईंलाई पार्टीको बैठकमा प्रश्न सोध्ने र चित्त बुझ्ने जवाफ नआए कारवाही हुनेसम्मको कुरा गरेका छ नि ?
बाहिर कसले के भन्यो मलाई थाहा छैन् । पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्यो भन्नेलाई सोध्नुस् न टोपबहादुरले भएको छैन् भनिरहेको छ भनेर । बाहिर जे पनि भनिदिने !
त्यसो भए तपाईंको विचारमा समाधानको उपाय के हो ?
सरकारले संशोधन प्रस्ताव लिनुपर्छ । सबैको न्यूनतम सहमतिमा थप परिमार्जनसहित असन्तुष्टका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । र, जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुतिः कमलराज भट्ट
अनौँठो मान्ने कुरै छैन रेल पनि चल्छ, पानी जहाज पनि चल्छः ओली (अन्तर्वार्ता)
केपी ओलीको बद्नाम गर्न खोजिएको थियो, प्रतिकार होइन सम्झाएका हौँः बद्रीप्रसाद न्यौपाने
ऋषि धमलाले फसाए: मनोज गजुरेल, हास्य कलाकार
शीर्ष नेताहरू नमिल्दा कांग्रेस दुईवटा जस्तो लाग्छः विनोद खनाल (अन्तर्वार्ता)